काठमाडौंमा 'इद उलफित्र' पर्वको रौनक (१३ तस्बिर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौंमा 'इद उलफित्र' पर्वको रौनक (१३ तस्बिर)
तस्बिर : आर्यन धिमाल/डिसी नेपाल डटकम
काठमाडौँ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले बुधबार हर्ष र उत्साहका साथ इद उद फित्र मनाईरहेका छन् ।
इल उल फित्रका अवसरमा बुधबार बिहानै राजधानीको घण्टाघरस्थित कास्मिरी मस्जिद र रत्नपार्कस्थित जामे मस्जिदमा ठुलो संख्यामा इस्लाम धर्मावलम्बीहरु पुगेर नमाज पाठमा सहभागी भएका छन् ।
मंगलबार सांझ चन्द्मा हेरपछि इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले एक महिना लामो रमदान पर्व पुरा गरि इद उल फित्र मनाएका हुन् । आजको दिन ब्रतालुले एक महिना लामो कठिन ब्रत समापनको अवसरमा नमाज पढेर एकआपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी दीन दुखीका लागि दान गर्ने गर्दछन् ।
इद उल फित्रको अवसरमा सरकारले बुधबार सार्वजनिक विदा दिएको छ । मुस्लिम आयोगको सिफारिस पछि यसअघि मन्त्रीपरिषद् बैठकले विहिबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार सांझ गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ती निकालेर बुधबार सार्वजनिक विदा गरिएको जानकारी गराएको हो ।